1. ဇေယျာ | 7:10 PM |
ဒါမျိုးကျ လူအခွင့် အရေး အော်ကြပါဦးလား အပေါင်း အပါတို. ရဲ..
ရေးသားသူအဖွဲ. ဇေယျာ at 7:10 PM0comments
NLD ပါတီအတွင်း စိတ်ဝမ်းကွဲမှုနှင့် မကြေနပ်မှုများ ဖြစ်ပေါ်လျှက်ရှိ
1. လွင်ပြင် | 7:09 PM | သတင်း
လူထုထောက်ခံမှုအများဆုံးရရှိထားသည့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးဆောင်သော NLD ပါတီအတွင်း အကွဲအပြဲများ ၊ အချင်းချင်းတရားစွဲဆိုမှုများ ၊ အုပ်စုလိုက် နုတ်ထွက်မှုများ မကြာခဏဖြစ်ပွားနေကြောင်း တွေ့ရှိ ရသည်။ ယခင်က ၎င်းကဲ့သို့ ပြသနာမျိုး NLD ပါတီအတွင်း ဖြစ်ပွားလေ့မရှိသော်လည်း ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ အတွက် ပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ်များ ရွေးချယ်ရာမှ NLD အဖွဲ့အတွင်း အကွဲအပြဲများ စတင်ဖြစ်ပေါ်လာကြောင်း သိရသည်။
ရေးသားသူအဖွဲ. လွင်ပြင် at 7:09 PM 1 comments
1. ဇေယျာ | 7:00 AM | ဆင်ခြင်နိုင်စေရန်
မနက်စောစော စီးစီး facebook မှာ ဒါလေးတွေ.လိုက်ရလို. လက်ယားပြီးရေးမိပါသည်။ကျတော်တွေးမိတာလေးတွေပါ စစ်သား ဖြစ်တာနဲ. ဒါတွေဝယ်မသုံးရဘူးလို. ဘယ်သူများပြောခဲ့လည်းမသိဘူး။စစ်သားတွေပဲ ကုန်းကောက်စရာ မရှိတော့သလိုလို။တချို. မိဘတွေချမ်းသာပြီး ၀ါသနာပါလွန်းလို. စစ်တပ်ထဲဝင်ခဲ့တဲ့
ရေးသားသူအဖွဲ. ဇေယျာ at 7:00 AM 8 comments
1. လွင်ပြင် | 7:00 AM | ဆင်ခြင်နိုင်စေရန်
မရှက်တက်တဲ့မျက်နှာတွေနဲ့သန်းပေါင်းများစွာထဲက ကလေးငယ်တွေကို ၀တ်စားဆင်ယင်မူ့ သရုပ်ပြအမှားပြတဲ့ရုပ်၇ှင်သရုပ်ဆောင်၊မော်ဒယ်လ်မင်းသမီးတွေကို ဘယ်ဂျာနယ်တွေ က မဖြစ်သင့်ဘူးလို့ရှုံ့ ချပေးဖူးသလဲ ၊ဦးဇင်ဝိုင်းတို့ကရော ဘယ်လိုတားမြစ်ထိန်းချူပ်ဖို့စည်းကမ်းတွေချမှတ်ဖို့အစီအစဉ်၇ှိသလဲ
ရေးသားသူအဖွဲ. လွင်ပြင် at 7:00 AM7comments
1. ဇေယျာ | 6:35 AM | သတင်း | သရော်စာ
လွင်ပြင်တစ်ယောက်ကမှ ပြောလို.မဆုံးသေးဘူး မဲဆောက်မှာ7julyကို ကျောင်းသားအမည်ခံ ပြည်ပြေးတွေလုပ်မလို.ပဲရှိသေး ထိုင်းရဲက မလုပ်ခိုင်းလို. ဘာမှမပြောရဲပဲ
ရေးသားသူအဖွဲ. ဇေယျာ at 6:35 AM 1 comments
Labels: သတင်း, သရော်စာ
1. လွင်ပြင် | 3:28 PM | သရော်စာ
အော်.....တော်တော်လည်းတရားကျဖို.ကောင်းတဲ့ လူတွေ သူ.အရပ်နဲ. သူ.ဇာတ်ကတော့ ဟုတ်နေတာပဲ။ဟိုတစ်ဖွဲ.က လည်း လျှို.၀ှက်စွာ ပေါ်တင်ကျင်းပပြီး Facebook ပေါ်ထိတက်လာတယ်။
ရေးသားသူအဖွဲ. လွင်ပြင် at 3:28 PM0comments
၂၀၁၂ ဇူလိုင်လ (၉) ရက်နေ့ တွင် ကမ္ဘာတစ်လွှားက Internet Server များ ခေတ္တ Shutdown ချမည် .
1. လွင်ပြင် | 7:18 AM | ကူးယူဖော်ပြ | သတင်း
From:: Computer Technical Notes & Sharing Softearws
၂၀၁၂ ဇူလိုင်လ (၉) ရက်နေ့ မှာ ကမ္ဘာတစ်လွှားက Internet Server များ ခေတ္တ Shutdown ချမည်ဖြစ်၍ ထိုနေ့တွင် အင်တာနက်အသုံးပြုမှု မရရှိနိုင်ပါ။
ဟက်ကာတွေရဲ့DNSChanger malicious software (malware) ဖြင့် DNS (Domain Name System) များကို တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် နိုင်ငံတကာမှာ ရှိကြတဲ့ အင်တာနက်သုံးစွဲသူ သန်းပေါင်းချီပြီ ထိခိုက်မှုတွေ ရှိနေတဲ့အတွက် အမေရိကန်နိုင်ငံ FBI ကနေ လာမယ့် ဇူလိုင်လ (၉) ရက်နေ့ မှာ ကမ္ဘာတစ်လွှားက အင်တာနက်သုံးစွဲမှုတွေကို ခေတ္တရပ်ဆိုင်းပြီး အဆိုပါ CNSChanger ပြဿနာကို ဖြေရှင်းမှာဖြစ်တယ်။
ရေးသားသူအဖွဲ. လွင်ပြင် at 7:18 AM0comments
Labels: ကူးယူဖော်ပြ, သတင်း
ဝေဖန် အကြံပြု စာမူများပေးပို.လိုလျှင်